Home Wararka Shaqaalaha iyo ciidanka BJFS oo ka hor yimid amarkii Mahad Cawad
Shaqaalaha iyo ciidanka BJFS oo ka hor yimid amarkii Mahad Cawad
Khilaafka ka dhex taagan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay Shaqaallaha iyo Ciidanka Ilaalada ka haaya xarunta ay ku shiraan xildhibaanada Golaha Shacabka.
Khilaafka oo ah mid xooggan ayaa Ciidamada Ammaanka iyo shaqaallaha xarunta Golaha Shacabka waxa ay la safteen gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xilli Gudoomiye ku xigeenada ay kasoo horjeeddaan Gudoomiye Mursal.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu soo waramaya in uu gacanta ku haayo xarunta Villa Hargeysa oo ay ku shiraan Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Gudoomiye ku xigeenada ayaa sheegay in ciidanka Ammaanka aysan faragalin ku sameyn karin xarunta Cida Imaaneysa, islamarkaana ay ka hortaggaan in xildhibaanada ay ku shiran inta ay taagan tahay Xiisadda Guddoonka Golaha Shacabka.
Maamulka Baarlamaanka ayaa lagu soo waramaya in ay raaceen Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in uu ku jiro xabsi guri.
Shakiga ka taagan Cida maamuleysa xarumaha ayaa yimid ka dib markii Gudoomiye ku xigeenada ay goor dhow war ay soo saareen ay ugu digeen Shaqaallaha iyo maamulka Baarlamaaanka,taasoo ku aadaneyd in aysan la safan Gudoomiye Mursal.
Labadda dhinac ee Khilaafku ka dhaxeeyo ayaa isku daayay in Midkaste Kooxda taageersan uu ku shiriyo Xarunta Villa Hargeysa oo loogu tala galay Guddiyadda Joogtada ah ee Golaha Shacabka in ay ku shiraan.
Previous articleMuqadishu: Qiimaha lagu kala iibsado hubka culus oo maanta sare u kacay
Next articleHeshiiskii dhawaan laga gaaray colaadii Dhumay oo laga taageeray Puntland
Jadwalka Doorashooyinka 2020 / 2021 oo dib udhacay
Ciidanka Booliska Gaalkacyo oo qabtay gawaari siday dhuxul sharci daro ah